မြန်မာ့သမိုင်းရာဇဝင်ထဲက ပျူမြို့တွေ ဘယ်လိုပျက်စီးခဲ့ကြသလဲ…?
ပျူမြို့ဟောင်းတွေကို ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ အယူအဆအမျိုးမျိုးရှိကြတယ် သမိုင်းရာဇဝင်တွေထဲမှာလည်း တရုတ်က လာတိုက်တယ် ခမာကလာတိုက်တယ်စသဖြင့်တွေ့ရတယ် ဒါတွေကို ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာတူးဖော်မှုတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့မှန်မမှန်မြေလွှာတွေကတဆင့်စစ်မယ်…
ဘယ်လိုစစ်မလဲမေးရင် ရှေးဟောင်းအဆောက်အုံတွေနဲ့မြေလွှဆက်စပ်မှုမှာ အဆောက်အုံတွေရဲ့အုတ်ရိုး အုတ်စီးအုတ်နင်းတွေဟာ ရုတ်တရက်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေအနေ အပုံလိုက်အထပ်လိုက်ဖြစ်ကျန်ရစ်တာ ဒါဆို လူဖျက်တာမဟုတ်ပဲသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆို ဘယ်လိုထပ်ပြီးဘာနဲ့စစ်မလဲ လူဖျက်တယ်ဆိုရင် များသောအားဖြင့်မီးပါရှို့တတ်ကြလို့ မြေလွှာမှာပြာမြေအမဲတွေကျန်မယ် တိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်ကရိယာအကျိုးအပဲ့နဲ့ တစ်ခါတလေ မြင်းအရိုးစုအသေကောင်တွေတောင်တွေ့ရမယ် ကျူးကျော်သူတွေဝင်ရောက်လာတာကိုကာကွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့သံဆူးညှောင့်တွေတွေ့ရမယ်…
သဘာဝဘေးဆို ဒါတွေမတွေ့ရပဲရုတ်တရက်ပြိုကျတဲ့ပုံစံ ပြိုကျတဲ့ အပေါ်အလွှာနဲ့အောက်အလွှာကြား ကာလအပိုင်းအခြားမရှိဖြစ်နေမယ် ဒါကငလျင်လိုဟာမျိုး ရေဘေးဆိုရင် မြေလွှာမှာ နှုံးအနယ်အနှစ်နဲ့ သူ့အပေါ်မှာ တစ်ဖြေးဖြေးပြိုကျလာတဲ့အုတ်ရိုးတွေ အပုံလိုက်ရှိမယ် ဒါပေမယ့်အပေါ်လွှာနဲ့အောက်အလွှာကြား အချိန်ကာလအပိုင်းအခြား သဘာဝ လေ ရေ သဲ ဝင်ရောက်တဲ့အလွှာတွေကကြားခံထားမယ် စသဖြင့် စသဖြင့် မြေလွှာဖြတ်ပိုင်းကပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသေချာကောက်ယူရမယ်…
ဟုတ်ပြီ တူးဖော်တွေ့ရှိချက်တွေအရ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပျူမြို့ဟောင်းတွေတူးဖော်တဲ့အခါ ဒီအထောက်အထားတွေ ဘယ်မြို့ဟောင်းတွေမှာ တူးဖော်တွေ့ရှိရပါသလဲ ဟံလင်းကို လေ့လာကြည့်ရင် ဟံလင်းရဲ့မြို့ဝင်ပေါက်တွေမှာ သုံးချောင်းထောက် သံဆူးညှောင့်တွေတွေ့ရှိရတယ် နောက်ပြီး တံခါးပေါက်တွေရဲ့အတွင်း ရဲမက်တွေဝင်ထွက်နားနေနိုင်တဲ့အခန်းလိုနေရာတွေမှာ ပစ်လို့ခတ်လို့ရတဲ့ ကျောက်ခဲလိုအတုံးတွေကအပုံလိုက် နောက်ပြီးမြေလွှာဖြတ်ပိုင်းမှာ ပြာမြေကိုအလွှာလိုက်တွေ့ရတာပါပဲ …
ဟုတ်ပြီ ဒါဆို ဟံလင်းဟာ စစ်မက်ဖြစ်ခဲ့ တိုက်ခဲ့ခိုက်ခဲ့ ကာကွယ်ခဲ့ရတာသေချာပါပြီ ဒါဆိုဆက်တွေးမယ် ဘယ်သူတွေကိုကာကွယ်ခဲ့ကြရတာလဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာလဲ… ရာဇဝင်သမိုင်းနဲ့ချိတ်ကြည့်ပေါ့ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုဆွဲထုတ်.. သုတေသနဆက်လုပ် ဗိသနိုးကတော့ အဆောက်အုံတော်တော်များများကအနဲဆုံး ၂ကြိမ်ပြုပြင်ထားတာတွေ့ရတယ် ကုန်းအမှတ် ၃၆ဆို အရှေ့ဘက်မြို့ဝင်ပေါက်ကို ပြန်ကျဉ်းပြီးပြုပြင်ထားတယ် ကုန်းအမှတ် BTO ၁၃နဲ့၁၆ဆို ၁၃မှာအောက်ကအဆောက်အုံဟောင်းရှိတယ် သူ့မှာဗိသုကာအုတ်တွေသုံးထာတယ် ပြန်ပြင်တော့ အဲ့ဒီဗိသုကာအုတ်တွေတစ်ခုမှပြန်မသုံးဘူး ပုံစံအသစ်ဆောက်တယ်သူ့အနီးအနားမှာ အဲ့ကုန်းအမှတ်၁၆ကို ယခင်ပုံစံအဟောင်းအတိုင်း ၁၃ကယခင်အသုံးပြုထားတဲ့ဗိသုကာအုတ်တွေသုံးပြီး ခပ်သေးသေးပဲပြန်ဆောက်တယ် နန်းတော်ရာလိုနေရာတွေမှာရှိတဲ့ ကုန်းအမှတ် KKG ၅ရဲ့ အခန်းနံရံတွေကိုပြန်ပြင်ထားတယ် နန်းတော်ရာရဲ့တောင်ဘက်မှာ အုတ်ရိုးအကြီးကို ကွေ့ဝိုက်ပြီးတာရိုးကြီးတစ်ခုကိုအသစ်ထပ်မံတည်ဆောက်တယ်…
ဒါတွေဟာဘာကြောင့်လည်း ကျူးကျော်စစ်ကြောင့်လား သဘာဝဘေးကြောင့်လားစစမ်းစစ်ရင် နန်းတော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အင်းကြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြာမြေတွေတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်မိုးရွာတဲ့အခါ ပိုသိသာတယ် အင်းကြီးထဲကိုစီးဝင်တဲ့သဲရေစီးချောင်းတွေတစ်လျောက်ပြာတွေတွေ့နေရတုန်း မြေလွှာအရ ယခုအချိန်နဲ့အနီးစပ်ဆုံးအချိန်ကာလမှာမီးလောင်ခဲ့တာပဲ …
နောက်တစ်ခုက နန်းမြို့ဝင်ပေါက်ကကျောက်ရုပ်ခြေထောက်ကြီး ၂ရုပ်က အတော်ကြီးတယ် ဒါပေမယ်အပေါ်ပိုင်းကိုတော့လုံးဝမတွေ့ရ မြေလွှာတွေထဲမှာလည်းသဲလွန်စမတွေ့ တမင်သက်သက်ကို ဖျက်ဆီးယူငင်ကြတဲ့သဘောပါပဲ တူးဖော်တဲ့အခါ လှံလိုလက်နက် ဓားလိုဟာတွေလည်းတွေရတယ် မြေလွှာဖြတ်ပိုင်းတွေအရ ပထမအကြိမ်မှာ သဘာဘေး ဒုတိယမှာ ကျူးကျော်သူဘေးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာတော့ကြိမ်းသေပါတယ်…
ဒါဆို ဘယ်လိုသဘာဝဘေးနဲ့ ဒုတိယအကြိမ်ပျက်ဆီးတာ ဘယ်သူတွေကလာကျူးကျော်တာလဲ ရာဇဝင်သမိုင်းတွေနဲ့ချိတ် သဘာဝဘေးကတော့ ငလျင်ရပ်ဝန်းမှာရှိနေတဲ့ဗိသနိုးဟာ ငလျင်ကြောင့် ရေရှားလို့ရေအသဲအသန်စုထားရတဲ့တစ်ဖက်ဆည်ကန်ကြီးတွေကွဲထွက် မြို့ကိုရေဖုံး အားနည်းချက်တွေပြန်ပြင်စသဖြင့်….
သရေခေတ္တရာကတော့ ဒီအချက်အလက်တွေကအတော်လေးသွေဖယ်တယ် ဘာသာတရားအားကောင်းတယ် ရာသီဥတုကောင်းတယ် မြေသြဇာလည်းကောင်းလို့ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ထွန်းစီးပွားရေးကောင်းလို့ စေတီအကြီးကြီးတွေတည်နိုင်သလို နန်းတော်အကြီးကြီးကိုလည်းတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ် နန်းတော်ရာဟာ ၄၄ဧကကျော်တောင်ရှိခဲ့ပြီး နန်းတော်ရဲ့ရေကျုံးတောင်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ် ရေကျုံးတွေကိုမြို့ရိုးတစ်ပတ်အုတ်တွေစီပြီးခမ်းနားစွာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ် နိုင်ငံရေး လူမှုရေး ဘာသာရေး စီးပွားရေးတွေမှာအထွတ်အထပ်ရောက်ရှိခဲ့တယ် ယနေ့ထိ မြို့အတွင်းမှာရှေးဟောင်းရွာတွေတည်ရှိနေတုန်း လယ်မြေယာမြေတွေမြေသြဇာအပြည့်စိုက်ပျိုးနေကြတုန်း ဘယ်မှာလည်းကျူးကျော်သူတွေ… ။
ရေးသားသူ – ကျော်မျိုးဝင်း